Grill Square Arina Grill loko mainty - China Shijiazhuang HGW Trading
Long fiainana matanjaka fanamboarana vy amin'ny bakoly karazana verinia farany. mety ho mora kokoa foldable tongotra fitehirizana. tampony sy anoloan'ny marina ka manampatra ny fanaraha-maso ny mari-pana. kodiarana for portability. 342,5 santimetatra tora-droa ny fandrahoan-tsakafo ivelany.
342,5 sq.in ambonin'ny mahandro sakafo
Sarony mena bakoly karazana verinia & Fire efajoro mainty
Tafavory vokatra Dimensions: 47L * 47D * 83H
Mitady idealy Square Arina Grill Manufacturer & mpamatsy? Isika manana fantina lehibe amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny Square Grills mitono hena no azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Mini Grill BBQ. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay. Product Categories: Outdoor Product> BBQ Grill
Previous: Grill saribao mitono hena ho an'ny zaridaina lasy ivelan'ny trano BBQ
Next: Table Top Arina Grill sy Side Afo Box